Transparency iri Sarudzo, Kuvimbika hakusi | Martech Zone
Chitatu, September 10, 2014 Svondo, July 19, 2015 Douglas Karr
Mumakore mashoma apfuura, ndanga ndiri munzvimbo inokatyamadza yekugovana yakawanda yehupenyu hwangu hwega online. Ndakagovana yakawanda yerwendo rwangu rwekudzikira uremu, ndinopokana nezvematongerwo enyika nedzidziso yebhaibheri, ndinogovana majee asina-mavara nemavhidhiyo, uye nguva pfupi yadarika - ndakagovana manheru kunze uko kwandaive ndainwa zvakati wandei. Ini handisi zvachose pachena online, asi ndiri wechokwadi chaizvo.
Yangu inonzi Pachena chinhu chepamusoro. Ndiri kusvitsa makore makumi mashanu, ndine bhizinesi rangu, ndinorarama hupenyu hwakashata ndisina chishuwo chekuunganidza mamirioni. Shamwari dzangu dzinoda kuti ini ndinogovana zvakanyanya online uye mabhizinesi andinoshanda nawo anondiziva uye anondida. Vamwe vaunoziva dzimwe nguva havazvikoshese… nekugunun'una kweupenzi uye zvekudya zvekudya. Ndine shamwari dzakaringana nevatengi, zvakadaro, saka handina basa nezvinofungwa nevamwe.
Handizvidembi kugovana chero chinhu chandinacho online. Ini ndinonzwa zvine simba kuti vamwe vanhu vanofanirwa kunzwa kutambura kwangu uye nekuona zvakanaka nezvakaipa zvehupenyu. Ini ndinotenda vakawandisa vedu tinochengeta munhu wenhema online. Isu tinotumira mifananidzo yemhuri yedu yakakwana, chikafu chedu chakakwana, zororo redu rakanaka, imba yedu yakanaka… uye handina chokwadi chekuti zvinobatsira. Fungidzira kuve unonetsa nyanzvi kana muridzi webhizinesi uye uchingoverenga zvidzoreso mushure mezvekuti nyika ine rima sei uye bhizimusi rakanaka zuva nezuva, mumwe anogona kunetseka kana ivo vakatemerwa izvi.
My Pachena haasi ini ndiri kuedza kuparadza kana kuvaka mukurumbira wangu online, zvinongova ini. Ini ndinogovana zvakanyanya kuti ndirege vamwe vanhu vazive kuti ndine mazuva akanaka, mazuva akashata, mazuva anotyisa, uye dzimwe nguva kumwe kuhwina kudiki kwandinoda kupemberera nevamwe… kana kukundikana kwandinogona kushandisa zano pane. Ndinoda kuva wechokwadi saka ndinogovera zvakanyanya sezvandinogona mukati mekufunga. (Hapana munhu anogovera zvese!)
Kana ini ndikaona hupenyu hwepamhepo hwemumwe munhu uye ndichingoona kukwana, zvinorasa kufarira kwangu nekutenda kwangu kuti kune chero kwechokwadi kune iwo mufananidzo wavari kugadzira. Ini ndinoshoreka uye mazwi avo ane pesvedzero shoma, kana paine. Kana ivo vachida kunyepa nezve hupenyu hwavo pamhepo, ivo vangangoda kunyepa kwandiri pane zvimwe zvinhu.
Iyo Transparency Scale
Ndichawedzera kuti vamwe vanongochengetwa nekuti ivo vanofanirwa kubata ngarava yakasimba… ndinoiremekedza. Kana iwe uchisimuka muindasitiri uye chinangwa chako ndechekufambira mberi mubhodhi, iwe hauna zvakawanda zvesarudzo. Isu tinorarama munharaunda inotonga uye kugadzira nyanzvi persona inogona kuve iri madikanwa. Uye zvinogona chaizvo kungova chikamu chehunhu hwako kuti uchengetedze zvakavanzika zvinhu padyo uye nekugovana zvinhu zvakajairika. Muzviitiko zvese izvi, zvinogona kuve zvechokwadi, zvakadaro. Ndiri kungotsoropodza vanhu venhema.
Mabhizinesi kashoma kukurukura zvakashata online uye ini handizive chero zviri pachena. Nepo hafu yemabhizinesi ese ari kutadza, iwe kashoma kunzwa chero chinhu online pamhepo pamusoro pesangano rekambani kusvika zvanyanyisa. Mune hupfumi hwakaoma, zvinosuwisa. Ini ndinofunga tinofanirwa kugovana zvakawanda nezve zvinonetsa muindasitiri yedu saka makambani mazhinji haafanire kuita zvikanganiso zvakafanana zvatakaita.
Pfungwa yangu ingori iyi… kana zvese zvaunogovana pasocial network, vatengi uye tarisiro ndeyekunyepera kuti zvinhu zvese zvakakwana, hausi kujekesa uye hausi kuzovimbwa. Iwe hausi wechokwadi. Kana iwe uchigovana zvakawandisa iwe unomhanyisa njodzi yekudzikisira mikana yako nekuti vanhu vanotonga. Iwe unofanirwa kutsvaga huwandu hwenzvimbo inojekesa iyo inobatsira iwe uye / kana bhizinesi rako. Yangu yakavhurika, asi yako inogona kunge isingave. Enderera nokungwarira.
Zvichida isu tinofanirwa kudaidza yedu online zano kushanduka, inogona kunge iri tsananguro yakatwasuka.
Sep 11, 2014 na9: 19 PM
Yakanaka uye yakajeka Doug.
Chinhu chakanaka pamusoro pekuvimbika ndeyekuti iwe uone kuti shamwari dzako chaidzo ndivanaani.
Sep 11, 2014 na9: 24 PM
Mazwi ehungwaru, LindaSherman!